TamTam Messenger ကို - အခမဲ့ချတ် & ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ » TamTam Messenger ကို - အခမဲ့ချတ် & ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု
TamTam Messenger ကို - အခမဲ့ချတ် & ဗီဒီယိုက APK ကိုခေါ်ဆို
TamTam ဆို platform ပေါ်တွင်မရရှိနိုင်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်အစွမ်းထက် Messenger ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်သို့ပင်ဆက်သွယ်ရေး; စာရိုက်, အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှေးအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိမယ့်အချိန်မှာတောင်, TamTam Messenger ကိုချိတ်ဆက်သင်သည်စောင့်ရှောက်မည်။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏စိတ်ခံစားမှုကိုဝေမျှကူညီပေးရန်ပျော်စရာစတစ်ကာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖန်တီး, သင် chat ဖို့ခံစားချက်အတွက်မဟုတ်ဘဲနေလျှင်, ကျွန်တော်အရမ်းလိုင်းများရှိသည်!
ဤတွင် TamTam Messenger ကိုကြိုးစားရန်အချို့သောအေးမြအကြောင်းပြချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
- Chat: အုပ်စုချတ်သို့သူငယ်ချင်းမိသားစုသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထည့်ပါ။ သင်ကသငျသညျအထိင်ဖြစ်စေပုဂ္ဂလိကပိုင်သို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားကလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- စတစ်ကာ: တစ်ခါတစ်ရံတွင်စကားများရုံမလုံလောကျဖွစျကွ၏ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာများပျော်စရာကာတွန်းသူတွေကိုအပါအဝင်အေးမြစတစ်ကာများ, ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
- အခမဲ့ဖုန်းခေါ်: TamTam Messenger ကိုကိုယ့်စာပို့ထက်ပိုပါတယ်။ အခမဲ့သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကဗီဒီယို & အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Start!
- လုံခြုံမှု: TamTam အားလုံးမက်ဆေ့ခ်ျဆာဗာဖြန့်ဝေကွန်ယက် encrypted နှင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ထို့အပြင် TLS cryptographic protocol ကိုနဲ့တူလူသိများတဲ့ကာကွယ်မှု algorithms, သုံးနေစဉ်ကျွန်တော်တို့သည်မည်သည့်ပုဂ္ဂလိက data transmit လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် protocol ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
- channel: ကိုရှာဖွေဖတ်သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမျှဝေကြောင်းလိုင်းများသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်စတင်ပါ။
- web-VERSION & PC ကိုအမှုသည်: သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုမရနိုင်ပါရင်တောင် TamTam Messenger ကိုတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံကို PC client ကိုသို့မဟုတ်ဘယ် operating system ပေါ်တွင်တစ်ဦးကို web browser ကိုတဆင့်လက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်
- စကားဝှက်မလိုအပ်: သင် chatting စတင်ရန်လိုအပ်အားလုံးသင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်, လွယ်ကူတဲ့ peasy ဖြစ်ပါတယ်။
- အော့ဖ်လိုင်း ACCESS: အဘယ်သူမျှမကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်? သင်ဆဲသမိုင်း chat ဖတ်ပါနှင့်မီဒီယာဖိုင်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ချိတ်ဆက်မှုပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကတစ်ခုချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်စဉ်ကာလအတွင်းကိုစေလွှတ်တော်မမက်ဆေ့ခ်ျများတန်းစီခြင်းနှင့်လှေတျတျောမူပါလိမ့်မည်
- အခမဲ့ကြော်ငြာမပါ: TamTam Messenger ကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်တယ်, ဒီကျနော်တို့လုပ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
ပိုများသောမကြာမီလာမည်! ကျနော်တို့ TamTam Messenger ကိုအသုံးပြုအခုအချိန်မှာသင်တို့အဘို့အခြို့သောအလွန်ကြီးစွာသော features အသစ်ချက်ပြုတ်နေကြသည်နှင့်ညှိနေ။
- TamTam startup အချိန်တိုးတက်လျက်ရှိသည်
- တိုးတက်လာသော user interface ကို
- ချတ်, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, အဆက်အသွယ်စာရင်းနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကမီနူး
TamTam Messenger ကို - အခမဲ့ချတ် & ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု
23.40 ကို MB
တိုးမြှင် Messaging ကို ...